भ्याट काम IP गर्न सक्नुहुन्छ? रूस मा कर
"गर्छ आईपी भ्याट संग काम गर्न सक्छन्?": धेरै नव दर्ता कारोबार प्रश्न उठ्छ। त्यहाँ सहित कर को आवेदन धेरै nuances छन् व्यक्तिगत उद्यमीहरू। तपाईं छोटकरीमा प्रश्नको जवाफ प्रयास भने यो unequivocally भने हुनुपर्छ: "! हो Can"। तर कुनै पनि मामला मा - यो अझ विस्तृत विचार लायक छ।
OCHO मा सपा
कानून अनुसार, सपा तिनीहरूले OCHO लागू गर्दा भ्याट, साथै संस्थाको विषय हो।
व्यक्तिगत उद्यमीहरू आफ्नो कार्यहरू व्यावसायिक गतिविधिको परिणाम रूपमा छ मुनाफा गर्न एक दृश्य संग बाहिर, को आदर मा कर को payers छन्। साथै उद्यम, सपा, भ्याट दाता को रूप मा, कर अधिकारीहरूले संग दर्ता गर्नै पर्छ र यो बिन्दुमा एउटा अनुप्रयोग फाइल द्वारा कर प्रणाली सरलीकृत कराधान सिस्टम रूपमा चयन गर्ने अधिकार छ। यस्तो आवेदन भने एक व्यक्ति उद्यमी द्वारा समयमा पेश छैन, यसलाई स्वचालित रूपमा उत्तरदायी कर तिर्न हुन्छ, र OCHO मा रहनेछ।
UTII मा सपा
को दाता UTII यदि हुनेछ र uat, तर केवल UTII को आवेदन को लागि आधार छ रोजगार को हदसम्म, गर्न कर्मचारी पनि गर्न सक्छन् तिर्ने बच्न। रूसी संघ को एक व्यक्ति उद्यमी धेरै गतिविधिहरु छ भने, त्यो अलग रिपोर्ट गर्न हुनेछ र प्रत्येक केही भ्याट दाता लागि हुन सक्छ।
तथापि, जो विदेश बाट रूसी संघ मा उत्पादन र उत्पादन समूह को importation मा UTII अवस्था तिर्न पनि ती व्यक्तिगत उद्यमीहरू यस्तो सामान मा कर तिर्न आवश्यक छ।
सपा लागि USN
सपा को UPDF मा छ, तर यसको लाभ को लागि3पात्रो महिना2लाख rubles पार भने, उहाँले स्वतः सरलीकृत कराधान सिस्टम प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता हराउछ र मूल्य थपियो कर को दाता बन्नेछ।
तसर्थ, व्यक्तिगत उद्यमी सक्छन् भुक्तानी गर्न, सानो गति संग भइरहेको बाट छुट प्रयोग गर्न। एक पटक यसको राजस्व दुई लाख को वैधानिक सीमा स्वतः OCHO अनुवाद सपा नाघ्यो र भ्याट दाता बन्नेछ।
यी नियमहरू एउटा सरल कर प्रणाली र आईपी संगठनहरूका लागि प्रदान गर्नुहोस्। यस छुट लागू संभावना फिर्ता, उहाँले मात्र सक्षम अर्को पात्रो वर्ष मा, निरीक्षण उपयुक्त आवेदन निर्देशन र जो सरल कराधान सिस्टम लागू गर्न आफ्नो क्षमता को उपस्थिति पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ कागज बनाउन भने हुनेछ। यस्तो कागजातहरू हो:
खाता पुस्तक आय र व्यय को प्रतिलिपि;
पत्रिकाको इनभ्वाइसहरू प्रतिलिपि।
यी कागजात अनुसार भने, रिपोर्टिङ अवधि तीन महिना लागि कुनै पनि राजस्व, कुल दुई लाख rubles, भ्याट संग पी काम नकारात्मक मा समाधान गर्न सकिन्छ कि प्रश्न भन्दा बढी छैन। सपा अर्को 12 महिना लागि सरल कराधान सिस्टम प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता regains र यसैले एक भ्याट दाता हुन ceases। आवेदन र आवश्यक कागजात जाँचको अर्को वर्ष को लागि सरल कराधान प्रणाली सक्षम अक्टोबर 20 भन्दा कुनै पछि पेश हुनुपर्छ यस वर्ष को।
excisable उत्पादनहरु व्यापार गर्दा पी को दिन्छिन् मूल्य थपियो कर यसलाई कराधान को कुनै पनि मोड छ कि छैन भनेर बिना रूसी संघ को। आईपी लागि कर कानून जस्तै उत्पादनहरु पालन मा हो:
एक इन्जिन क्षमता 150 लिटर भन्दा ठूलो संग कार र मोटर चक्र। पी।
पेट्रोल, Diz। इन्धन, इन्जिन तेल;
उड्डयन स्ट्रोक, प्राकृतिक ग्याँस।
बारेमा सपा कुरा गर्दा 2014 मा देखि अर्थमा बनाउन गर्दैन रक्सी पनि excisable उत्पादनहरु सूचीमा समावेश गरिएको छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, यो उल्लेख, सपा बिक्री रक्सी, निषेध गरिएको छ कि छैन भनेर कराधान को के रूप मा बिना तिनीहरूले छन्। यो प्रावधान व्यवस्था स्थापित गरिएको छ।
मूल्य कर, लाभ थपियो
कानून छन् जो भ्याट विषय व्यापार विकल्प, एक नम्बर को लागि प्रदान गर्दछ। तदनुसार, सपा कुनै पनि गतिविधिहरु आयोजित भने, उहाँले आवश्यक थिएन कर तिर्न। भ्याट लाभ अनिवार्य विभाजित छन्, असम्भव लागू छैन। यस्तो गतिविधिहरु को मामला मा भ्याट संग पी काम, नकारात्मक मा निर्णय गरिनेछ कि को प्रश्न छ। तर त्यहाँ करदाता समाधान गर्न सक्ने लागू गर्न तथाकथित कर प्राथमिकताहरू, अर्थात् स्वैच्छिक लाभ वा पनि छन्।
अनिवार्य भ्याट गैर-उपयोग व्यापार को लागि विकल्प समावेश:
विदेशी अमेरिका वा तिनीहरूको बासिन्दा गर्न अस्थायी प्रयोग भवनहरु लागि दाखिल।
व्यापार, आवश्यक चिकित्सा घटक को मूल्य उत्पादनहरु को उत्पादन, कानून द्वारा अनुमोदित सूची अनुसार।
चिकित्सा निदान, रोकथाम, उपचार र पुनःस्थापना लागि सेवाहरूको प्रावधान, यो सूची पशु क्लिनिक र कस्मेटिक क्लिनिक समावेश गर्दैन।
हेरविचार, गर्भवती महिला, असक्षम, वृद्ध र छोराछोरीको आवश्यकता ती को हेरविचार लागि सेवाहरूको प्रावधान।
यात्री यातायात, शहरी उपनगरीय र सहरी सडक, रेल, नदी र समुद्र परिवहन, ट्याक्सी र ट्याक्सी बाहेक।
सेवाहरूको प्रावधान र अनुष्ठान एजेन्सीहरू प्रदान गर्दछ को प्रदर्शन।
VAT को भुक्तानी अन्तर्गत प्राथमिकताहरू
स्वैच्छिक लाभ आफ्नो लिङ्कमा आईपी वा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सधैं एक VAT को संभावना प्रयोग नगर्नुहोस् गैर-प्रयोग यो उद्यमी लागि, रूस केही कर यसको लाभ दिन उचित छ।
अक्सर OCHO मा taxed ठूलो counterparties कम्पनीहरु र भ्याट छूट उद्यमीहरू संग अनुबंध प्रवेश। किनभने यस्तो सहयोग खरिद उत्पादनहरु लागि कटौती लागू गर्न आफ्नो अधिकार अभ्यास गर्न संभावना तिनीहरूलाई खोस्नु हुनेछ। कहिलेकाहीं, लाभदायक counterparties उद्यमी आकर्षित गर्न consciously को VAT छुट माफ गर्न जान्छ। व्यापार क्षेत्रमा तलको तालिका, यो अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ। भ्याट प्राथमिकताहरू को आदर मा लागू:
उत्पादन र धार्मिक उत्पादनहरु को व्यापार। यो उदाहरण, धार्मिक साहित्य, धार्मिक वस्तुहरु लागि छ।
एक व्यक्ति उद्यमी द्वारा उत्पादित र बेच माल सेवा र उत्पादन असक्षम वा परिस्थितिमा जहाँ विकलांग कर्मचारीहरु को संख्या, को व्यापारीले मा कामदारहरूलाई 80 भन्दा बढी प्रतिशत को समग्र।
स्थानीय अधिकारीहरूले को विशेष सूची मा निर्वाचकगण निर्माण र राष्ट्रिय कला शिल्प को माल व्यापार,।
बीमा विभिन्न प्रकारका।
फिलिम स्क्रीनिंग, संगीत, ठूलो मनोरञ्जन घटनाहरू लागि व्यापार टिकट।
तिनीहरूलाई मा काम विकासकर्ताहरूले, व्यापार परिसर वा साझेदारी।
सपा एक भ्याट दाता हो भने, उहाँले तीन स्वीकृत दर एक को बजेट को लागि कर तिर्न हुनेछ। तिनीहरूलाई एक - त्यहाँ, रूस मा कर हो धेरै सट्टेबाजी विकल्प भ्याट संग। प्रायजसो मा, भ्याट दर 18% छ। अर्को व्यवस्था नभएसम्म, सबै परिस्थितिमा संचालित।
0% को दर
0% निर्यात शासनमा देश को क्षेत्र बाट उत्पादनहरु को निर्यात, साथै गतिविधिहरु को एक नम्बर मा को लागि प्रयोग गरिन्छ:
तेल यातायात, आरएफ पाइपलाइन द्वारा ग्याँस विदेश;
रेल वा हावा द्वारा उपनगरीय यात्री यातायात, जब क्रिमीआ को गणतन्त्र मा स्थित गन्तव्यहरू एक;
सेवाहरू भन्सार कार्गो;
रूस मा विधिवत मान्यता प्राप्त विदेशी देशहरुमा, को रूसी संघ प्रतिनिधिको इलाका आयात उत्पादन, तिनीहरूले व्यक्तिगत आवश्यकता लागि कूटनीतिक मिशन र राजनयिकहरुलाई 'परिवार को हित मा प्रयोग गरिन्छ प्रदान।
10% को दर जो समावेश सामान, एक exhaustive सूची लागू:
बच्चाहरु को लागि बनेको उत्पादनहरु;
अन्य कामुक वा प्रचार पक्ष समावेश ती भन्दा सबै मुद्रित periodicals,;
औषधि र चिकित्सा महत्त्व तर अत्यावश्यक मा VAT को आवेदन सबै छूट को उत्पादनहरु;
अन्य सबै उत्पादन र सेवा छैन माथिको समूह, 18% मा taxable भ्याट समावेश।
फाइदा र लागू VAT को बुरा
को VAT को आईपी को लागि आवेदन pluses भन्दा धेरै minuses फलाउँछ। तिनीहरूलाई बीच यो जस्तै यस्तो गहन नकारात्मक पक्षहरू, टिप्पण लायक छ:
- व्यक्तिगत आय कर र भ्याट राजस्व र व्यय लागि पहिचान को तरिका मा फरक। संगठन आयकर तिर्ने भने, आय र व्यय को पहिचान को एक विधि चयन हुन सक्छ र यसरी सपा यस्तो कुनै सम्भावना छ मा दुई कर लागि लेखा सँगै पुल। को ढुवानी - कर व्यवस्थामा स्पष्ट व्यक्तिगत आय कर को प्रयोजन को लागि कि राजस्व र व्यय भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ, र भ्याट उद्देश्यका लागि संकेत गर्नुभयो। कि आईपी डाटा मा लेखा विभिन्न रजस्टर मा रिपोर्टिङ चौथाई को अन्त्यमा विभिन्न हुनेछ जब यो वास्तवमा अवस्थामा निस्कनु हुनेछ, छ। यो निकै confuses र लेखा विभाग को काम complicates।
- 2014 मा व्यवसायीहरूको लागि पनि लेखा विभाग को र सपा को काम जटिल, स्वामित्व सबै प्रकारका ल्याइयो जो भ्याट अनिवार्य इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिङ। को UPDF र अन्य मसला द्वारा कर को घोषणा भने। regimes कागज मा पारित गर्न सम्भव अझै पनि छ, भ्याट को आवेदन स्वतः पैसा र समय थप लागत entails। तपाईं को लागि एक सम्झौता साइन इन गर्न आवश्यक हुनेछ डाटा स्थानान्तरण मसला संग दूरसंचार च्यानलहरू मार्फत। डिजिटल हस्ताक्षरको उद्यमी उत्पादन गर्न अपरेटर, संचार सेवा र लागत थप को आपूर्तिकर्ता संग एउटा सम्झौता आवश्यक संभावना छ जो कार्यस्थल लेखापाल वा उद्यमी, मा इन्टरनेट को उपलब्धता सुनिश्चित गर्न, अतिरिक्त सफ्टवेयर स्थापना गर्नुहोस्।
- जटिलता र कर घोषणा को unwieldiness पनि काम सुविधा छैन। भ्याट फिर्ताको एकै समयमा, एक त्रैमासिक आधारमा लिन र कर तिर्न हुनेछ। साथै, अझ राम्ररी कम्पनीहरु र व्यक्तिगत उद्यमीहरू भ्याट तिर्ने को बयान अनुगमन को निरीक्षण। यो भ्याट को क्षेत्र मा उल्लंघन को ठूलो संख्या कारण हो।
एक व्यक्ति उद्यमी द्वारा VAT को आवेदन को लाभ प्रमुख ग्राहकहरु किनभने कटौती लागू गर्न संभावना को भ्याट् गर्न सहयोग गर्न थप इच्छुक कि सायद श्रेय गर्न सकिन्छ। यो सार्वजनिक अनुबंध, अर्थव्यवस्था को रणनीतिक क्षेत्रमा प्रमुख अनुबंध को विशेष गरी साँचो हो।
सपा यस्तो गतिविधिमा भाग लिन योजना छ भने, अनुबंध को राशि सबै माथि बेफाइदा कवर सक्छ। साथै, वास्तवमा त्यो भ्याट को आवेदन र मालिक मात्र होइन लेनदेन को कार्यान्वयन मा, भ्याट payers अन्तरक्रिया, कर कटौती रूपमा इनपुट VAT को खाता लिन, तर पनि खरिद लेनदेन मा अनुमति दिन्छ।
को भ्याट् घोषणा
आईपी लागि भ्याट फिर्ताको धेरै संस्करण मा अवस्थित छ। ती हुन्:
भ्याट OCHO गर्न सपा लागि फर्काउँछ।
विशेष मा भ्याट लागि व्यक्तिगत उद्यमीहरू लागि घोषणा। कराधान regimes।
अप्रत्यक्ष कर मा भ्याट घोषणा।
पहिलो अवस्थामा एक मानक भ्याट फिर्ती खुवाउनुभयो। 2014 देखि, यो आवश्यक मात्र इलेक्ट्रोनिक फारम पेश गर्नु पर्छ। त्रुटिहरू पत्ता गर्दा त्रुटि पत्ता लगाउने को घोषणा को पेश्की पछि अवस्थामा तुरुन्तै पठाइने निरीक्षकों utochnenku। पछिल्लो क्वाटरमा लागि अफसेट भ्याट राजस्व को राशि एक लाख भन्दा बढी थियो कि embodiment मा 20 औं दिन एक त्रैमासिक आधारमा घोषणामा भाडामा। अन्य embodiments, एक घोषणा 20 अंक गर्न कर अख्तियार मासिक गर्न र माथि पठाइएको छ।
भ्याट घोषणा कल्पना मा गर्दा। कर regimes excisable उत्पादनहरू वा धेरै गतिविधिहरु सञ्चालन को भिन्न को embodiment मा कर निर्देशित। जो एक विशेष विषय हो। मोड, र अन्य (हरू) छैन। यो घोषणा पनि 20 औं दिन विद्युतीय फारममा आपूर्ति गरिएको छ।
सीमा संघ को क्षेत्र मा उत्पादन व्यापार गर्दा अप्रत्यक्ष कर लागि घोषणा लागू गरियो। बेलारुस इलाका गर्न उत्पादनहरु निर्यात गर्दा त्यो छ। यस्तो घोषणा उत्पादनहरु को निरीक्षण गर्न आयात को आवेदन importation पछि लागू गरिएको छ। जब सपा बेलारुस मा संगठन संग काम छ एक embodiment, मा, भ्याट संग कि पी काम को प्रश्न unequivocally सकारात्मक छ। लेखा उद्देश्यका लागि उत्पादन पोष्ट पछि 20 औं दिन अघि घोषणा गरे। घोषणा यस प्रकारको छैन सही गर्न सकिन्छ। यदि त्रुटिहरू फेला र कमजोरीहरू आयात अर्को आवेदन सेवा गरे।
आरोपबाट कर - यसको सार र केही सुविधाहरू
कर्पोरेट सम्पत्ति कर: अग्रिम भुक्तानी भुक्तानी लागि म्याद
किन घर आएको छैन र म तपाईंलाई आवश्यक एक रसिद बिना कर तिर्न?
कर USN - के यो गणना कसरी, सरल मामलामा यो छ
र कसरी कहाँ भ्याट मा ऋण पाउन?
"बेबी" को एक मिश्रण। समीक्षा र विवरण
ASUS P5L 139motherboard: गुणवत्ता र विश्वसनीयता, समय परीक्षण
राम्रोका लागी क्यारेक्टर कसरी परिवर्तन गर्ने? मनोवैज्ञानिक सल्लाह
"खुट्टा cramped" को नेतृत्व गायक: नाम र जीवनी
परिवर्तन र टिप्पणीहरू संग "प्रवर्तन कार्यवाही मा" FZ-229
योअखिम वन Ribbentrop: जीवनी, प्रमुख मिति र जीवनको घटनाहरू
एक पिकनिक लागि व्यञ्जन: सुझाव र व्यञ्जन विधि
क्राइमन महलों: फोटो र विवरण सूची
ग्रीस: रोड्स द्वीप - प्राचीन सभ्यता को एक खजाना trove